Kuumba matanda chishandiso chinoshandiswa mune ekutanga. Kana muchina wekuumba uchinge uchishanda, iyo Mabhokisi ekuumba anochengeta jecha kuti riumbe chimiro.
Kuumba matanda chishandiso chinoshandiswa mune ekutanga. Kana muchina wekuumba uchinge uchishanda, iyo Mabhokisi ekuumba anochengeta jecha kuti riumbe chimiro. Mushure mekunge zvinhu zvakaita sesimbi yakanyungudutswa zvadururirwa mujecha rakaumbwa iro raive rakabatwa nekuumba Mabhasikiti, iyo yakanyungudutswa zvinhu zvinozomarara uye kuumba kukanda kwaunoda. Kuumba mabhodhoro kazhinji kunogadzirwa kubva kune yakakoswa simbi uye wozogadzirwa kuti usangane.
Bhokisi rekuumba, iro rakatumidzwa zvakare sejecha bhokisi, bhokisi rekuumba kana bhokisi rejecha rekuumba mutsara ndiyo inodiwa michina yekushandisa yeiyo otomatiki uye semi-otomatiki kuumba mutsara weiyo foundry. Isu tinoshandisa epamberi CNC michina maturusi ekugadzirisa uye kushandisa iyo trilinear inobatanidza kuyera tambo yeiyero yekuongorora kuona yakanyanya kunyatso uye kuchinjika kwebhokisi rejecha. Bhokisi rejecha rakagadzirwa neductile iron, yegiredhi-grey grey simbi kana simbi yakasungwa simbi ine hunhu hwehukama hwakanaka uye yakanyanya kumanikidzwa kushamiswa kuramba. Tinogona kugadzira nekugadzira mhando dzakasiyana dzejecha mabhokisi zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi kana zvakare kuburitsa mabhokisi ejecha zvinoenderana nemadhirowa evatengi uye zvehunyanzvi zvinodiwa
Fekitori yedu ine makore anopfuura makumi mana eesandbox uye trolley yekugadzira ruzivo, uye yakapa mabhokisi ejecha nematiroli emitsara dzakasiyana dzekuumba, kusanganisira otomatiki kuumba mitsara, semi-otomatiki kuumba mitsara uye michini yekugadzira mitsara, KW, HWS, + GF +, SINTO, FA. , FH, nezvimwe.
Isu tiri vanyanzvi vezvigadzirwa zvemabhasketi muChina uye isu tinoshandisa chaiyo Machining Centres uye Coordinate Inspection yakaoma Quality Control System yekuvimbisa mhando yepamusoro.
Horizontal Flaskless richigadzirisa Line, Flask, Kuumbwa chinu, Kuumbwa bhokisi, Semi-Automatic richigadzirisa Line, Flaskless richigadzirisa Machine,